Na igbe akwụkwọ ozi dị, enwere m ike ime igbe mbata | Martech Zone
Iji igbe akwụkwọ ozi dị, enwere m ike ịme mbata igbe mbata
Tuesday, April 2, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mgbe m nụrụ ọkachamara dị ka Michael Reynolds nke Spinweb kwurịtara Igbe mbata (na-eru ebe ị nweghị ozi ịntanetị na igbe mbata gị), ana m eji nwayọ snicker na mumbleNne gị bụ onye ọkpọ, nna gị na-esi isi nke ndị okenye! ”
Igbe mbata m nwere karịa ozi 3,000. Di na nwunye ole na ole gara aga, ọ gafere ozi 20,000 ruo mgbe m gbachapụrụ 17,000 na mberede. Achọghị m ịma. Nyere m smug Outlook (pun zubere) na hoarding email, echetụbeghị m na m ga-aga Igbe mbata, ọ bụ ezie. Amachaghị m na m nwere mmasị na ya - ruo ugbu a.
Ezigbo enyi, Adam Small, gwara m banyere ya Igbe akwụkwọ ozi - ngwa maka Gmail nke na-arụ ọrụ na iPhone. Ọ bụ amamiihe… na-ekwe ka ọrịa strok 4 na ozi ọ bụla nke na-enye gị ohere ịdebe, ahịhịa, tinye na ndepụta, ma ọ bụ swipe maka oge ọzọ. Nhọrọ nke ikpeazụ na-apụta na windo nke na-enye gị ohere ịhọrọ mgbe e mesịrị na mgbede, na mgbede a, echi, izu ụka a, n'izu na-abịa, n'ime otu ọnwa, otu ụbọchị ma ọ bụ họrọ ụbọchị!
Nke a bụ ihe amamihe dị na ya - nke m mechara gafee bụ ọkacha mmasị m n'ihi na anaghị m enwe oge iji gụọ ozi ịntanetị niile m nwetara n'ụbọchị n'ihi arịrịọ ndị ahịa. Adịghị m na Igbe mbata na agaghị adị maka izu ole na ole… mana enwere olileanya!
Tags: igbe efuAkwụkwọ oziigbe akwụkwọ ozi dị ngwa
Cations na Co-Citations maka mpaghara SEO
Apr 2, 2013 na 9: 04 AM
Batman… ọ nwere ike ime, Doug! Naanị ikwere 🙂
Apr 2, 2013 na 9: 05 AM
Amamiihe! asị na ịnweta ozi ịntanetị m tochiri!
Apr 3, 2013 na 4: 49 AM
Ọma gụọ. Daalụ, Doug.
Igbe akwụkwọ ozi bụ ihe kasị mma ma maka nhazi ozi ịntanetị na ọ laa, ma abụ m onye ofufe mgbe m kwesịrị “ịhazi usoro”. Ma ọ bụghị ya, ana m agbalị igbochi ịlele na email na ekwentị m ka m na-achọpụta na ọ dị nwayọ nwayọ karịa nhazi na desktọọpụ.
Maka desktọọpụ ịbawanye nrụpụta (dịka igbe igbe), m na-eji unrollme, boomerang yana ndị kọntaktị ndị otu m nwere ngwa akpọrọ WriteThat.name. Ọzọ dị ukwuu ngwa maka na-akpụ akpụ ngwa ngwa na efu igbe bụ mailstrom.